प्रयोगशाला ३ सिफ्टमा चलाएर दैनिक १० हजार स्वाब परीक्षण गर्ने मन्त्रालयको तयारी – अब दैनिक
प्रयोगशाला ३ सिफ्टमा चलाएर दैनिक १० हजार स्वाब परीक्षण गर्ने मन्त्रालयको तयारी
बिराटनगर;-सरकारले असार १५ गतेदेखि दैनिक १० हजार जनाको पिसिआर विधिबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले देशभर २४ वटा प्रयोगशालाबाट दैनिक ६ हजार जनाको पिसिआर परीक्षण हुँदै आएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भएका प्रयोगशालाहरूको परीक्षण क्षमता बढाएर दैनिक १० हजार जनाको परीक्षण गर्ने गृहकार्यमा मन्त्रालय जुटेको बताए। त्यसका लागि अहिले भएका प्रयोगशालाहरूलाई तीन सिफ्टमा चलाइने गौतमले जनाए।
‘परीक्षण किट र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर प्रयोगशालाहरूलाई तीन सिफ्टमा चलाउने भनेका छौं। त्यो गर्दा अहिले भइरहेको परीक्षणभन्दा बढी हुन्छ,’ उनले भने।
अहिले प्रयोगशालाहरूमा दुई सिफ्टमा परीक्षण भइरहेको छ। जसमा दैनिक २ सय देखि ३ सय जनाको परीक्षण भइरहेको छ। यसलाई नै थप जनशक्ति र परीक्षण किट व्यवस्थापन गरेर मन्त्रालयले तीन सिफ्टमा सञ्चालन गरेर परीक्षण बढाउने तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयले यसअघि नै निजी प्रयोगशालालाई पनि परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको छ। निजी प्रयोगशालाहरूले परीक्षण थालेपछि दैनिक २ देखि ३ हजार जनाको थप परीक्षण गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ।
तर मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालाहरूलाई परीक्षण दिने निर्णय गरे पनि त्यसलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न तदारूकता देखाएको छैन।
मन्त्रालयबाट निर्देशन नआउँदा कुन-कुन प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्न दिने भनेर अनुगमन हुन सकेको छैन।
मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड तयार पारेपछि टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले निजी प्रयोगशालाहरूको अनुगमन गरेर कुन-कुन प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्न दिने भनेर टुंगो गर्छ।
प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रूना झाले मन्त्रालयबाट निर्देशन आउनुबित्तिकै प्रयोगशालाहरूको अनुगमन सुरू गरिने जनाइन्।
प्रयोगशालाले सुरूआतमा ९ वटा प्रयोगशालाले परीक्षण गर्न सक्छन् भनेर सूची तयार पारेको छ। तर निजी प्रयोगशालाहरूले भने सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा परीक्षण गर्न नसकिने जनाउँदै आएको छ।
मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालाहरूलाई एउटा नमूना परीक्षण गरेबापत ५ हजार ५ सय शुल्क तोकेको छ।
प्रवक्ता गौतमले भने, ‘यस्तो बेला निजी प्रयोगशालाहरूले पनि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो नि।’
मन्त्रालयलले सुरूदेखि नै निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्न दिने कुरामा चासो दिएन। तर पछिल्लो समय प्रयोगशालाहरूमा नमूनो चाङ लागेपछि निजी प्रयोगशालासँग सहकार्य गर्न मन्त्रालयले कदम अघि बढाएको हो।
अहिले पनि प्रयोगशालाहरूमा धेरै नमूना परीक्षणको पर्खाइमा छन्। सुदूरपश्चिमबाट मात्र आइतबार ४ हजार ४ सय नमूना काठमाडौं पठाइएको छ। अहिले पनि झन्डै एक लाख मानिस क्वारेन्टिनमा छन्। जसमा अधिकांश भारतबाट आएका हुन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै भदौसम्म ४० हजार संक्रमित पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसैले मन्त्रालयले परीक्षणको क्षमता बढाउने तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयले उपत्यकामा पनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको अस्पतालहरूमा पनि पिसिआर परीक्षण सुरू गर्ने तयारी गरेको छ। यी तीन ठाउँमा परीक्षण सुरू गर्न अहिले त्यहाँ खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम दिइरहेको टेकु प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. झाले बताइन्।
अहिले उपत्यकामा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकु, वीर, टिचिङ र पाटन अस्पतालमा परीक्षण हुँदै आएको छ।
यस्तै, डडेल्धुरा र दैलेख पनि परीक्षण सुरू गर्ने तयारी गरिएको छ।
यसरी हेर्दा अहिले भइरहेको दैनिक ६ हजार परीक्षणमा निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि सामेल गराउँदा त्यो संख्या ८ हजार पुग्छ। बाँकी २ हजार परीक्षण भने भएकै प्रयोगशालाहरूको क्षमता बढाएर र थप प्रयोगशालाहरू स्थापना गरेर पुर्‍याउने मन्त्रालयको तयारी छ।
पछिल्लो समय भारतबाट अत्यधिक मानिस आएपछि सरकारले परीक्षण धान्न सकेन। नाकामा समेत परीक्षण नगरी ती मानिसहरूलाई सिधै आ-आफ्नो जिल्ला पठाइयो।
जिल्लामा क्वारेन्टिनको बसाइँको क्रममा पनि उनीहरूको पिसिआर परीक्षण हुन सकेन। सरकारले परीक्षणको चाप धान्न नसकेपछि परीक्षणमा कडाइ गर्न कोभिड-१९ टेस्टिङसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गर्‍यो।
निर्देशिकाले क्वारेन्टिनमा भएको तर लक्षणविहीन रहेका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्ने कुरा समेटेन। धेरै मानिसहरूलाई परीक्षणविनै घर पठाइयो।
अहिले पनि मन्त्रालयले क्वारेन्टिनमा १४ दिन बसेका मानिसहरूको पिसिआर परीक्षण नगर्ने जनाएको छ।
प्रवक्ता गौतमले भने, ‘१४ दिन पुगेका व्यक्तिहरूले अरुलाई सार्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसैले क्वारेन्टिनमा आउने नयाँ व्यक्तिहरूको मात्र पिसिआर परीक्षण गर्ने भनेका छौं।’
यद्यपि कोरोनाका अधिकांश संक्रमितहरूमा लक्षण नहुने भन्दै विज्ञहरूले यसले थप जोखिम निम्तिने चेतावनी दिँदै आएका छन्।